Nhau - LSR yemvura silicone muforoma kunyorera
Liquid silica gel yakapfupikiswa seLSR, chinova chigadzirwa chinogona kufarirwa nevatengi nevagadziri. Liquid silica gel inogadzirwa nesilica gel zvigadzirwa. Iyo ine kusimba kwakanaka, isina mvura uye hunyoro kuramba, uye inopesana neacid, alkali uye nezvimwe zvinhu zvemakemikari. Kazhinji inoshandiswa kutsiva zvigadzirwa zvepurasitiki zvezuva nezuva.
Liquid silicone rabha jekiseni kuumbwa tekinoroji (LIM) inzira nyowani uye inoshanda yesilicone yekuumba nzira yakagadzirwa mukupedzisira kwema1970. Inobatanidza yakanakisa mashandiro emvura silicone rabha nemidziyo iyo inogona kunyatso uye inogadzikana yakazara jekiseni kuumbwa. Iyo yakaumbwa nyowani yerudzi rwe silicone yerabha yekuumba uye yekugadzirisa tekinoroji inoda chete zviviri zvinoriumba (izvo zvinogona zvakare kusanganisira zvinobatsira zvikamu zvakaita sekuenderana kwemavara) mumidziyo, uye maitiro kubva pakudyisa, metering, kusanganisa kuumba yakazara zvoga. Iyi tekinoroji yekugadzirisa inogona kuzadzisa chinangwa chekurerutsa maitiro, kupfupisa nguva yekugadzirisa, kuchengetedza zvinhu, uye kugadzirisa kugona. Uye pane zviripo hapana marara pamucheto wekugadzira, izvo zvinobatsira kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Iyo yose jekiseni kuumbwa system yakakamurwa kuita zvinotevera zvikamu:
Chikwata chekutanga ndechekuyera uye yekudyisa unit, Inonyatso kuyera zvikamu zviviri zvemvura silicone rabha zvakananga kubva mupaketi yekupakira kupinda muchirongwa kuburikidza neye hydraulic kumanikidza ndiro;
Chikamu chechipiri chinhu chinosanganisa. Izvo zvinhu zviviri zvinopinda musystem zvakanyatsosanganiswa zvakaenzana kuburikidza neyakagadzika musanganiswa, uye hapana mabhuru anounzwa muhurongwa;
Chikamu chechitatu ndiyo jekiseni kuumbwa. Iyo yakavhenganiswa silicone yerabha zvinhu inowedzeredzwa jekiseni muforoma kuburikidza neiyo jekiseni unit, uye zvakaenzana kugoverwa kune yega yega mhango, uyezve zvinopisa zvine simba. Maitiro ese akashongedzerwa zvizere, uye hapana manyorerwo ekugadzirisa anogona kugadziriswa mushure mekumisikidza ma parameter ekuvandudza kugona kwekugadzira.
Zvinodzivirira zvinhu zveLSR yekugadzira kugona
LSR ine zvakwakanakira zvakawanda, inofanirwa kuve netariro yakakura kwazvo mumusika. Asi sekureva kwazvino tekinoroji yemugadziri, LSR haina hushamwari, iyo inosanganisirwa mukudzivirira kwekugona kwekugadzira. Nezve kugona kwekugadzira, unogona kureva chinotevera chimiro. Chinhu cheA chinenge chiine chinokonzeresa uye chikamu B chine muchinjikwa-wekubatanidza mumiririri. Mushure mekusanganisa na1: 1, inojowa muforoma nechisviniro chakakosha uye yakasvinudzwa kuita elastomer pakushisa kukuru, ndokuzopora muforoma. kuumba.
Iwo makuru mabharanzi akatarisana nawo parizvino anosanganisira:
1. Iyo yekumhanyisa kumhanya kwechinhu icho pachayo ndeye 5-8S / mm, iyo inoganisira jekiseni kuumbwa kwekugadzira nekukurumidza kumhanya.
2.Silicone yemvura ine hunyoro hwakanyanya isati yarapwa, uye zviri nyore kuburitsa kupenya panguva yejekiseni jekiseni, izvo zvinoda zvakakwirira pane iko kugadzirisa kwekugadzirisa kweiyo mold uye kunyatso kweiyo jekiseni kuumbwa muchina.
3. Liquid silicone zvigadzirwa zvakapfava, uye chigadzirwa chichawedzera nevhoriyamu panguva yekurapa, uye kudzikira muvhoriyamu mushure mekutonhora, izvo zvinokonzeresa kuoma kukuru mukumisikidza kwechigadzirwa panguva yekugadzira zvoga.